वालिङ महोत्सव स्याङ्जालीको साझा मञ्च : अध्यक्ष एवं संयोजक पौडेल::Nepal's News Portal
यही माघ १७ गते विहिबारदेखि शुरु हुने सातौँ वालिङ महोत्सवको आगमनसंगै यति बेला वालिङमा फरक किसिमको रौनक देखिएको छ । स्याङ्जा जिल्लामा रहेको मध्यमागमा अवस्थित वालिङमा प्रत्येक २÷२ वर्षको अन्तरालमा वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले महोत्सवको आयोजना गर्ने गरेको छ । यसपटक भने स्थानीय सरकार आएपछिको पहिलो महोत्सवमा वालिङ नगरपालिका समेत आयोजक बन्दै संघलाई हुलका पार्ने प्रयास गरेको छ ।
यसैबीचमा संघका अध्यक्ष एवं महोत्सव आयोजक मूल समिति संयोजक शोभाकान्त पौडेलसंग सातौँ वालिङ महोत्सवको अन्तिम तयारीका बारेमा कालीगण्डकी खबरकर्मी कला राना सँग गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत छ :-
१. अध्यक्ष ज्यू, आरामै हुनुहुन्छ ?
आरामै छु, स्याङ्जाकै पहिचानको रुपमा रहेको महोत्सवको अन्तिम तयारीमा जुटेका छौँ । महोत्सव सफलताका लागी गठित ३२ उपसमितिहरु अहोरात्र तयारीमा खटिरहनुभएको छ । यहाँका स्थानीयबासी समेत महोत्सव हेर्ने बेग्र प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ ।
२. महोत्सवको संघारमा छौँ हामी, तयारीका विषयमा जानकारी गराईदिनुस न् ?
सर्वप्रथम त, धन्यवाद प्रश्नको लागी यहाँको यो मिडिया मार्फत महोत्सव विषयमा केहि कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा । २०५४ सालमा यहाँका उद्योगी, व्यापारीहरुको संस्थाको रुपमा वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको रुपमा जन्म भएको थियो । संघले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै यहाँको उद्योग, व्यापार, र पर्यटनको विकास गर्दै समृद्ध वालिङ बनाउने र वालिङलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरािष्ट्रय स्तरमा चिनाउने उद्देश्यका साथ विगतका वर्षदेखि नै महोत्सवको आयोजना गरिएको छ ।
संघले पहिलो महोत्सव २०६३ सालमा आयोजना गर्दै ष्सअगाडि ६ वटा महोत्सव सफलतापुर्वक सम्पन्न गरिसकेको सबैलाई सर्वविविधै छ । संघ यो समयमा पनि सातौँ वालिङ महोत्सवलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरेको छ । हामी अन्तिम तयारीमा छौँ । महोत्सव प्रचारप्रसार तथा छिमेकी जिल्ला एवं प्रदेशलाई निम्ता गर्नका लागी पोखरामा समेत पत्रकार सम्मेलन ग¥यौँ । वालिङ महोत्सव स्याङ्जालीको साझा मञ्चको रुपमा अगाडि बढेको साथै स्याङ्जा जिल्लामा एकै पटक एकै ठाउँमा धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरु जम्मा हुने थलोको रुपमा विकास भएको छ । यो सातौँ महोत्सव पनि साझा मञ्चको रुपमा रहने र स्याङ्जाको समग्र उद्योग, विकास, पर्यटन र व्यापारीक प्रर्वद्धनका लागी मेलाले सघाउ पु¥याउनेछ ।
३. सातौ वालिङ महोत्सवमा कुन कुन क्षेत्रबाट सहभागिता जनाउँदैछन् त ?
विगतका वर्षहरुमा संघ एक्लैले महोत्सवको आयोजना गरेतापनि यसपटक भने हामीले स्थानीय सरकार समेत पाएका छौँ, मेरो भनाई सातौँ वालिङ महोत्सवको आयोजकको रुपमा वालिङ नगरपालिका समेत उभिएको छ । निजि क्षेत्रले गर्दै आईरहेको महोत्सवलाई सरकारले समेत हातेमालो गर्दा हामी निकै भाग्यमानी ठानेका छौँ । आर्थिक समृद्धिका लागी निजि र सरकारी क्षेत्र संगसंगै हुनुपर्छ । साथै यहाँका सम्पुर्ण समाजिक संघसंस्था, क्लब, आमा समुह, वित्तिय संस्था, मिडियालगायत सम्पुर्ण स्थानीयको सहभागिता रहेको छ ।
४. महोत्सव त, पछिल्लो समय हरेक पालिकामा आयोजना गर्न थालिए, सातौँ वालिङ महोत्सवममा केका लागी दर्शक आउने त ?
तपाँईको कुरा एकदमै सही छ, पछिल्लो समय विभिन्न संघसंस्थाले समेत बाक्लै रुपमा महोत्सवको आयोजना गर्न थालेको अवस्था छ तर वालिङ महोत्सवले दर्शकको मस्तिष्कमा भिन्न प्रकारले छाप छाडेको छ । धार्मिक ऐतिहासिक महत्व रहेको आँधीखोलाको तिरमा महोत्सव स्थल रहनु पनि हाम्रो लागी विषेश हो । हामीले कृत्रिम ताल निर्माण गरेका छौँ आँधीखोलालाई थुनेर, धार्मिक महत्व रहेको आँधीखोलमा जलयात्राको अवसर मिलाईएको छ । स्याङ्जामा रहेका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका धार्मिक स्थल तथा पर्यटकीय स्थलहरुको अवलोकनको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय साहसिक प्याराग्लाईडिङ प्रतियोगिता समेत सम्पन्न गरेको स्याङ्जा वालिङमा प्याराग्लाईडिङका माध्यमबाट महोत्सवको अवलोकन गर्न सकिन्छ । सुन्तला र कफिको रुपमा चिनिएको स्याङ्जामा यसको व्यापार तथा कृषिविशेषज्ञबीचमा अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम रहेको छ । नृत्यका पारखीहरुलाई मध्यनजर गर्दै स्याङ्जा डान्स आईडल छ, युवावर्गलाई लक्षित गर्दै सर्वाधिक राशीको भलिबल प्रतियोगिता समेत राखिएको छ । महिलाहरुको लागी सांस्कृतिक रत्यौली गीत प्रतियोगितालगायत धेरै नयाँ स्वाद मिल्नेछ दर्शकलाई महोत्सवमा ।
५.अन्यमा पाठकलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
वालिङ महोत्सवमा बालक, बयस्क र बृद्धहरुलाई लक्षित गर्दै विभिन्न ईभेन्टहरु आयोजना गरिएको छ । प्रदेशकै विषेश महोत्सव भन्छु म, यस महोत्सवलाई सबैलाई चुलै निम्तो गर्छु, एक पटक वालिङ महोत्सवमा अवलोकन गर्ने अवसर मिलाउनुस, तपाईको मस्तिष्कमा भिन्न खालको छाप महोत्सवले छाड्नेछ । यही माघ १७ देखि २८ गतेसम्म वालिङ खेलमैदानमा महोत्सवको आयोजना गरिएको छ । सके पुरै दिन नसके एक दिन वालिङ खेलमैदानमा यहाँहरुले पाईला टेक्नुहुनेछ मेरो विश्वास पनि छ, धन्यवाद ।